ကိန်းစ် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ထိပ်ဆုံးဆုရဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ 'Parasite' ကိုရီးယား ရုပ်ရှင် - Yangon Media Group
ကိန်းစ် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ထိပ်ဆုံးဆုရဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ ‘Parasite’ ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်
ယခုနှစ်အတွက် ကိန်းစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို မဖွင့်လှစ်မီ တောင်ကိုရီးယားဒါရိုက်တာ ဘုံဂျွန်ဟို၏ ‘Parasite’ ရုပ်ရှင်သည် ထိပ်တန်းဆုကိုရရှိမည်ဟု ရေပန်းစားနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဒါရိုက်တာဘုံ၏ သတ္တမမြောက်ရုပ်ရှင် ‘Parasite’ သည် (၇၂)ကြိမ်မြောက်ကျင်းပမည့် ယင်းပွဲတော်တွင် အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်သည့် Palme d’Or အတွက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ရွေးချယ်ခံထားရသည်ဟုဆိုသည်။
၂ဝ၁၇ခုနှစ်တွင် “Okja” ရုပ်ရှင်ဖြင့် ကိန်းစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ထပ်ဆုံးဆုပေးအပ်ရန် ဆန်ခါတင်စာရင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ၎င်း၏ “Host” နှင့် Mother ရုပ်ရှင်တို့ကို ပြသခဲ့ဖူးသည့်အတွက် ယခုရုပ်ရှင်သည် ပဉ္စမမြောက်ပြသမည့်ရုပ်ရှင်လည်း ဖြစ်သည်။ ကိန်းစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် မေ ၂၁ ရက်၌ ပြသရန်စီစဉ်ထားသော ယင်းရုပ်ရှင်သည် ဆင်းရဲ သော မိသားစုတစ်ခုက သားဖြစ်သူမှာ ချမ်းသာသော မိသားစုအတွက် စာသင်ပြသူအဖြစ် အလုပ်ရပြီးနောက် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများကို တပ်မက်လာသည့်အကြောင်း အခြေခံထားသည့် ဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာဘုံက ”ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ ကိန်းစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆိုတာ ကျွန်တော် သွားတဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ”ဟု လွန်ခဲ့သောလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်ဝေဖန်သူများ၏အဆိုအရ ဂျပန်ဒါရိုက်တာ ဒီရိုကာဇူကိုရဲအီဒါသည် ယမန်နှစ်က “Shoplifters” ရုပ်ရှင်ဖြင့် ဂုဏ်သိက္ခာအကြီးမားဆုံးဆုကို ရရှိခဲ့သည့်အတွက် ယခုနှစ်သည် ဒါရိုက်တာဘုံ၏ အလှည့်ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။ ယခုနှစ်ကိန်းစ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွင်း ဖိတ်ကြား ခံရသည်မှာ “Parasite” ရုပ်ရှင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေ။ ဒါရိုက်တာ လီဝန်ထယ်ရိုက်ကူးထားသည့် အက်ရှင်စွန့်စားခန်းရုပ်ရှင် “The Gangsterç the Copç the Devil” သည်လည်း ကိန်းစ်ရုပ်ရှင်ပွဲ တော်တွင် ပြသမည့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားစာရင်း၌ ပါဝင်ထားသည်။
အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းရှင်များ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးပေးမည့် စီးပွားရေး ပတ်
အောင်ရဲထွေး အသတ်ခံရမှု ရုပ်သိမ်းမိန့်ကို အတည်ပြု သင့်၊ မသင့်ကို တိုင်းတရားလွှတ်တော်၌ နှစ်ဖက?
ယခုနှစ်အတွင်း မွန်ပြည်နယ်၌ ရုံးနှင့် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ဆောက်လုပ်ရန် ငွေကျပ် သန်း ၅ဝဝဝ ကျော?
ကယ်လီဖိုးနီးယား တောမီးကြောင့် လူ ၁ဝ ဦးသေဆုံးပြီး လူထောင်ပေါင်းများစွာကို ကယ်ဆယ်ထားရ